Ụkpụrụ na ọkwa chọrọ nke igwe ịgba agba agba aja aja na iwepụ nchara
Mwepụ nchara bụ iji ikuku abịakọrọ gbawaa ụfọdụ grit n'elu nchara site na egbe ájá ájá. Ọ bụghị nanị na ọ na-ewepụ nchara ngwa ngwa, ma na-akwadebekwa elu maka eserese, spraying, electroplating na usoro ndị ọzọ. N'elu mgbe ájá gbasasịrị na-adị ọcha site na cer...
Nchekwa ike, nchekwa gburugburu, nchekwa, ihe niile ịchọrọ ịma gbasara igwe anaghị agba nchara dị ebe a!
Ka ọ dị ugbu a, maka ihicha elu nke ọla ndị na-abụghị ígwè na ngwaahịa igwe anaghị agba nchara, a ka nwere ọtụtụ abrasive na-adịghị edozi (aluminom oxide agba aja aja, garnet, emery, beads glass, wdg). Agbanyeghị, ka ihe obodo chọrọ maka nchekwa gburugburu ebe obibi na-arị elu na elu...
A na-akpọkwa wiil ụgbọ ala nchara, wiil, na wiil ụgbọ ala. A na-eji unyi mee ka wiil ndị ahụ dị mfe. Ọ bụrụ na anaghị ehicha ha ogologo oge, ha na-adị mfe imebi na deform. Ya mere, nlebara anya pụrụ iche kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka mmezi nke wiil, Hanger ụdị shot gbawara m ...
* Ọrụ nkwalite na nwughari nke ahịrị ịgba agba agba maka ndị ahịa Xuzhou gafere nke ọma ma nyefee ya maka ojiji, nke onye ahịa ghọtara nke ọma. • Ụlọ ọrụ ndị ahịa: ụlọ ọrụ ihe ọkụkụ; • Ngwa ụdị: turntable shot blasting igwe; • proj...
1.Small pneumatic ma ọ bụ eletriki derusting. A na-akwado ya nke ọma site na ọkụ eletrik ma ọ bụ ikuku abịakọrọ ma kwadebere ya na ngwaọrụ derusting kwesịrị ekwesị maka ịmegharị mmegharị ma ọ bụ mmegharị rotary iji mezuo ihe mkparị dị iche iche nke o...
Mgbawa agbawa na ájá gbawara
N'ozuzu, sandblasting na ogbugba ogbugba bụ isi ụzọ maka metal ngwaahịa elu ọgwụgwọ : ire a siri ike elu, roughen a ire ụtọ n'elu, kpụrụ a elu, ma ọ bụ wepụ elu conteminants wdg Shot gbawara: Ọ na-ewe centrifugal ike nke elu na-agbagharị agbagharị diski. gbaa ígwè...
Enyerela ọrụ ọzọ dị elu maka nyocha TAA mere mbanye yinye ụgbọ okporo ígwè maka igwe crawler shot blasting machine maka SOTE nabata nke ọma.
Na nso nso a, "ụdị crawler ogbugba ogbunigwe igwe maka yinye ụgbọ okporo ígwè forgings" mepụtara na arụnyere nke anyị maka SOTE nnyefe akụrụngwa Co., Ltd nke Sany otu na-anabata nke ọma. Ọ bụ ọrụ nnyefe ọzọ na-aga nke ọma mgbe “ịgwakọta ahịrị mkpuchi drum gbagburu ngwa ngwa…
Nkwalite na imeziwanye ihe, mbelata ọnụ ahịa yana nkwalite arụmọrụ - nkwalite igwe ịgba agba agba abụọ nke ụlọ ọrụ anyị na ọrụ imeziwanye na Chengdu na Hunan bụ nke ọma bupụtara nke ọma.
Igwe na-agbawa agba agba a na-arụ ọrụ enweghị ike imezu ihe achọrọ eji eme ihe ugbu a n'ihi nhazi mbụ, nrụzi na ngbanwe chọrọ. Nkwalite nke ọma na imeziwanye ihe bụ usoro kachasị ọnụ ahịa iji zute ya. Dị ka ọkachamara keukwu na-eweta ọrụ maka n'elu ọgwụgwọ, anyị a ...
Ozi ọma—-Zibo TAA Metal biri na Made-in-china na Septemba 2021
Mgbụsị akwụkwọ bụ oge owuwe ihe ubi, na Septemba Zibo TAA Metal Technology Co., Ltd ebiela na usoro azụmahịa mba ụwa ọzọ: Mere-In-China. Weebụsaịtị bụ https://zibotaa.en.made-in-china.com/. Dị ka ị maara Made-in-china bụ usoro azụmahịa nke abụọ kasị ukwuu na mba ụwa na china. Ihe...
Ogo na-enweta uru - a napụtara ọrụ nke igwe na-agba agba ígwè dị arọ ígwè dị arọ nke ụlọ ọrụ anyị nyere maka Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.
N'oge na-adịbeghị anya, a nabatala ọrụ nke "igwe nchara dị arọ nke ogbugba ọkụ" nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma tinye ya maka Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. (NISCO) nke ọma. Ọrụ a niile were naanị ọnwa atọ site na nkwenye iwu ruo na mbufe. N'ime ụlọ siri ike dị otú ahụ ...